ကပျပါပေ့ ပီကရေယျ: ဘုရားသခင်သို့ ပေးစာ
စာတိုက်မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး အင်မတန်မှ သနားတတ်၊ ကြင်နာတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့အလုပ်က တစ်နေ့တစ်နေ့ ပို့ထားတဲ့ စာတွေရဲ့ လိပ်စာကို သေချာစစ်ဆေးပြီး လိပ်စာ အမှားတွေ၊ မပြည့်စုံတာတွေကို မူလ စာရှင်ဆီ ပြန်ပို့ပေးရတယ်။ တစ်နေ့ သူ စစ်ဆေးနေတုန်း တုန်ချိနေတဲ့ လက်ရေးနဲ့ လိပ်စာ ရေးထားတဲ့ စာတစ်စောင် သွားတွေ့တယ်။ လိပ်မူထားတာက ဘုရားသခင်ဆီသို့ တဲ့။ ဒီစာကို သူ ဖောက်ဖတ်ကြည့်မှ ဖြစ်မယ်လို့ သူ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူ ဖောက်ဖတ်လိုက်တော့ အထဲမှာ ရေးထားတာက
လေးစားကြည်ညို အားကိုးရပါသော ဘုရားသခင်ရှင့်
ကျမဟာ အခုဆိုရင် အသက် (၈၃) နှစ် ရှိတဲ့ မုဆိုးမကြီး တစ်ယောက်ပါ။ အင်မတန် နည်းလှတဲ့ ပင်စင်လစာနဲ့ တစ်လတစ်လ အသက်ဆက်နေရပါတယ်။ မနေ့က ကျမရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ် ခါးပိုက် နှိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ အထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ ဒေါ်လာတစ်ရာဟာ ကျမမှာ ရှိတဲ့ ဥစ္စာ အကုန်ပါပဲ။ နောက်တစ်လ ပင်စင်လစာ မထုတ်မချင်း ကျမမှာ သုံးစရာ ပိုက်ဆံ မရှိတော့ပါဘူး။
လာမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့ဟာ အမေများနေ့ပါ။ ကျမရဲ့ လက်ကျန် သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ကို အဲဒီနေ့မှာ ညစာ ထမင်းလာစားဖို့ ဖိတ်ထားပြီးပါပြီ။ ဒီပိုက်ဆံမှ မရှိလေတော့ ကျမမှာ ဘာစားစရာမှ ဝယ်လို့ မရတော့ပါဘူး။ တခြား အားကိုးစရာ ဘာ အဆွေအမျိုးမှလည်း မရှိလေတော့ ဘုရားသခင်ကိုပဲ အားကိုးရတော့မှာပါ။ ကျမကို ကူညီပါဦး။
ဒီစာကို ဖတ်ပြီး အတော်လေး သနားသွားတယ်။ ဒါနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို စာလိုက်ပြပြီး တတ်နိုင်သမျှ ပိုက်ဆံလိုက်စုတော့တယ်။ အားလုံးကလည်း သနားကြလေတော့ အိတ်ကပ်ထဲမှာ ပါတဲ့ ပိုက်ဆံအကြွေတွေကို ထုတ်ပေးရှာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စုလိုက်တာ အားလုံးပေါင်း ၉၆ ဒေါ်လာ ရတယ်။ အားလုံးရဲ့ စေတနာပေါ့။ ဒါနဲ့ အဲ့ဒီ ပိုက်ဆံကို စာအိတ်လေးနဲ့ ပြန်ပိတ်ပြီး စောနက စာပိုင်ရှင် အဖွားအိုဆီ ပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်။
စာတိုက်က ဝန်ထမ်းတွေက သူတို့ လုပ်လိုက်တဲ့ ကောင်းမှုအတွက် ဝမ်းသာ ကြည်နူးလို့ မဆုံးဘူး။ အမေနေ့လည်း နီးနေတော့ ကိုယ့်အမေအရွယ် အဘွားအိုတစ်ယောက်ကို ဒါနပြုလိုက်ရတာ အတော်လေးလည်း ကျေနပ်နေကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အမေနေ့လည်း ကျော်ပြီး ရက်အနည်းငယ်ကြာတော့ အဖွားအိုရဲ့ ဘုရားသခင်ဆီ ပြန်စာ ရောက်လာတယ်။ သူက ဘုရားသခင်က ပို့တယ်ပဲ ထင်တာကိုး။ အဖွားအိုရဲ့ ကျေးဇူးတင်စကားကို ပီတိအပြည့်နဲ့ ခံစားမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ အားလုံး ဝိုင်းအုံလာပြီး ရောက်လာကြတယ်။ စာထဲမှာ ရေးထားတာက ...
အရှင်ဘုရားရဲ့ အခုလို ရက်ရောမှုကို ကျမအနေနဲ့ ဘယ်လို ကျေးဇူးတင်ရမှန်းကို မသိတော့ပါဘူး။ အရှင်ဘုရားရဲ့ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲမှုကြောင့် ကျမ လက်လွှတ်လိုက်ရပြီ ထင်ထားတဲ့ ပျော်မွေ့ဖွယ် ညစာစားပွဲလေးက ပြန်ပြီး အသက်ဝင်လာပါတယ်။ ကျမအနေနဲ့ ဘဝမှာ အင်မတန် ပျော်စရာ ကောင်းတဲ့ နေ့တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ဘုရားသခင်ရဲ့ သဘောထား ကြီးမားတဲ့ လက်ဆောင်အကြောင်းလည်း သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြလိုက်တယ်။ အော် ဒါနဲ့ စကားမစပ်၊ စာတိုက်မှာ သူခိုးတွေ ရှိနေတာတော့ သေချာနေပြီ။ ဘုရားသခင် ပေးတဲ့အထဲက လေးဒေါ်လာ ရော့နေလို့။
ဟာသ ပုံပြင်လေး ဆိုပေမယ့် စေတနာမှန်ရင် အကျိုးပေးပါတယ် ဆိုတဲ့ လောကဓမ္မတာကို နည်းနည်း ပြောင်ထားသလိုပဲ။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ အဖွားအိုနေရာမှာ ကျနော် ရှိနေရင်လည်း ဘာလို့ လေးဒေါ်လာ ရော့နေသလဲ ဆိုပြီး သံသယ ဝင်မိမှာတော့ အမှန်ပဲလေ။ တစ်ဘက်ကလည်း စာတိုက်က လူတွေအနေနဲ့ ပေးလည်း ပေးရသေးတယ်၊ ငါတို့ကို စော်ကားလိုက်သေးလို့ တွေးမိမှာပဲ။ ဒါလည်း သဘာဝကျတယ်။ ဒါက လောကဓမ္မတာဆိုတဲ့ သဘာဝကို ဖီဆန်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမြီးအမောက် မတည့်တတ်တဲ့ သဘာဝကြီးမှာ အစီအစဉ် မကျတဲ့ စေတနာတွေ အလစ်သုတ်ခံလိုက်ရတာ ဖြစ်မယ်။
A man worked inapost office. His job was to process all mail that had illegible addresses. One dayaletter came to his desk, addressed in shaky handwriting to God. He thought, "I better open this one and see what it's all about." So he opened it and it read: "Dear God, I ama83 year old widow living onavery small pension. Yesterday someone stole my purse. It hadahundred dollars in it which was all the money I had until my next pension check."
The rest of the day, all the workers feltawarm glow thinking of the nice thing they had done. Mother's Day came and went, andafew days later came another letter from the old lady to God. All the workers gathered around while the letter was opened. It read, "Dear God, How can I ever thank you enough for what you did for me?" "Because of your generosity, I was able to fixalovely dinner for my friends. We hadavery nice day, and I told my friends of your wonderful gift. " "By the way, there was4dollars missing. It was no doubt those thieving bastards at the post office!!!!!!
Thursday, December 18, 2008 | စာညှနျး ဘာသာပြန်, ဟာသ
ဤပို့စ်အား Thursday, December 18, 2008 နေ့တွင် ရေးသားထားပြီး ဘာသာပြန် , ဟာသ နာမည်ဖြင့် အညွှန်း သက်မှတ်ထားပါသည်။ ကွန်းမန့်များအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိလိုလျှင် RSS 2.0 ဖြင့် တောင်းဆို၍ ရယူနိုင်သည်။ လာရင်းနေရာ သို့ ပြန်လည် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။